Xasan Shiikh oo Turkiga aadey
4 Dec 4, 2012 - 10:12:17 AM
Madaxweynaha Soomalia Xasan Sh. Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta 04 December,2012 u dhoofay dalka Turkiga kadib casuumaad ay ka heleen Dowlada dalkaas oo gacan weyn siisay Somalia xiligii Abaaruhu dilaaceen sanadkii hore.
Wafdigan ayaa waxaa ka mid ahaa Wasiirada Arimaha Dibada, Difaaca, Maaliyada iyo saraakiil kale oo dowlada ka tirsan, waxaana Muqdisho ka qaaday diyaarad ay leedahay dowlada Turkiga.
"Safarkeenu wuxuu salka ku hayaa sidii aan Dowlada Turkiga ugala soo hali lahayn sidii Somalia ay gacan uga siin lahayd arimaha difaaca, amaanka, dhaqaalaha iyo dib u dhiska dalka" ayay tiri Fowziyo Yuusuf X. Aadan oo ka mid ah wafdiga uu horkacayo Xasan Shiikh.
War kasoo baxay Villa Somalia ayaa isagana lagu sheegay in Madaxweynuhu uu ka helay casuumaad dalka Turkiga, uuna kala hadli doono arimo Muhiim ah oo ay ka mid yihiin sidii Turkiga ay dib ugu bilaabi lahaayeen Mashaariicii uu Somalia ka waday.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxay la kulmi doonaan inta ay ku sugan yihiin dalka Turkiga madaxda dalkaas iyagoo kala hadli doona adkeynta xiriirka labada dal iyo iskaashi ay sameystaan, waxayna sidoo kale la kulmi doonaan Soomaalida ku nool dalkaas.
Dalka Turkiga ayaa lagu xusuustaa gurmad weyn oo uu shacabk Somalida u fidiyay markii ay abaaro oo macluul sababay ay ku dhufteen Somalia, waxaana abaartaas ay sababtay in dadka iyo xoolo fara badan ay naftooda ku waayaan.
Booqashadan ayaa waxay noqonaysaa tii ugu horeysay oo Madaxweyn Xasan uu ku tago dal ku yaala Qaarada Yurub, isagoo horay u booqday dalalka Ethiopia, Uganda iyo Jabuuti oo ay ciidamo ka joogaan Somalia.